महानगरपालिकाले भन्यो, ‘हामी फोहर उठाउँदैनौं घर भित्रै राख्नुस्' कारण के हो ?
महानगरपालिकाले भन्यो, ‘हामी फोहर उठाउँदैनौं घर भित्रै राख्नुस्’ कारण के हो ?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो घरवाट निस्कने फोहर केही दिन घरभित्रै राख्न आग्रह गरेको छ । फोहर सडकमा यत्रछत्र हुन थालेपछि महानगरपालिकाले यस्तो आग्रह गरेको छ । **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
महानगरले अझै केही दिन फोहोर नउठाउने जनाएको छ । महानगरले उपत्यकाभित्र उत्सर्जित फोहोरमैला विसर्जनका लागि नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर २ स्थित सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा पु¥याउने गरेको थियो ।